Meningitis ngokuthi ukuthuthukiswa ukuvuvukala igobolondo ezithambile ozungezayo ubuchopho. Lesi sifo kwenzeka kokungenisa kwamagciwane ezingaba ukudiliza imingcele ukuthi Ukuvikela ubuchopho kanye ulwelwesi lwalo. Lokhu kungenzeka ngokuthintana esimweni lapho kwakukhona khona eyenza umuntu acabange eseZwini isilonda into engcolile; umzila hematogenous - ngenxa yegazi elinobuthi. Nezilwanyana ezincane zingase futhi uthole umuntu udabula emoyeni, khona-ke eba abandayo, sinusitis, noma imidiya otitis, ngenxa ngegciwane kakade uwela kanye meninges. Izimpawu meningitis e abadala kufanele kwaziwe yibo bonke abantu, kusukela ukwelashwa esifike ngesikhathi esibhedlela uyakwazi ukuvikela imiphumela eziningi eziyingozi.
Ngokuba ukuthuthukiswa meningitis akukhona ukuthi kubaluleke kuphela ekutholeni igciwane ezingaba yokunqoba isithiyo esibangwa gazi ebuchosheni, kodwa futhi buthakathaka jikelele zomzimba, izifo ezingelapheki yobuchopho (isimiso 'lapho mncane, kukhona futhi zicekele "). Ngakho, i-bacterium esifanayo, got supercool obhemayo ingaphezu engabangela nenyumoniya. Kodwa njengoba esuke esekhululekile efika indoda, owahlupheka hhayi kudala, ubuchopho ukuhlukumezeka, osemusha nge anda ebuntwaneni ingcindezi intracranial noma umuntu omdala ngokuyothenga isifo sokuqina kwemithambo yegazi cerebral, ingxenye enkulu kuba imbangela meningitis.
Izimpawu meningitis e abadala
Lesi sifo inezimpawu ezithile:
ikhanda, okuyinto lwamelana isizinda nokwanda okuphawulekayo lokushisa. Ungishiya okukhulu, ukumboza wonke ikhanda (okungenani - emathempelini noma ebunzini), okuthuthukiswa ushintsho isikhundla umzimba, ukuthi umsindo ophakeme uzilimaza, ube esejika ukukhanya. Sibekezele kulula amanga ohlangothini lwakhe, ikhanda lakhe aphonswe emuva. Isikhathi more lidlula, aba maningi Ubuhlungu, singangena kancane ukukhululeka ubuhlungu;
anda ukuzwela ezintweni ngaphambilini ongabonakali;
isicanucanu, ukuhlanza kungenzeka ngemva kwalokho kuba lula;
e abadala izimpawu meningitis futhi zihlanganisa ukubukeka isitshele ngezigigaba amnyama (obomvu, onsomi, brown noma black) umbala, okungadingi ukuluma, engafulatheli ugodo lapho esisuka ngaphansi kwesikhumba, ngokuvamile iqala ukuvela ezinqeni nemilenze.
Lokhu - izimpawu zokuqala meningitis kwabadala. Abakwazi zavele, futhi ngemva izifo odlule ezifana nesimungumungwana, inkukhu Pox, isimungumungwana, mumps. Lezi izifo, nakuba kubhekwa "kobuntwana", evame kakhulu kubantu abadala, kanti omdala umuntu, aba maningi amathuba okuba yokugula.
Izimpawu meningitis e abadala kungenzeka emva umuntu has isikhashana wahlushwa sinusitis, sinusitis, otitis, wayenobuhlobo abandayo ezimbi. Meningitis ngokuvamile iningi livela ngemva izifo ENT kulezo abantu, ngenxa yokulimala ekwakhiweni azalwa naso noma bathenga amathambo skull, zithonywa kokuphela cerebrospinal fluid kusukela ekhaleni noma indlebe. Bonke abezindaba yisisu noma otitis kungenzeka (futhi ngokuvamile iphela) meningitis, futhi uma ungathathi plastic ezilimele amathambo aqatha, kungaholela omunye meningitis e ukukhubazeka kanye nokufa imbala.
Ezinye izimpawu of meningitis e abadala
Ngezinye izikhathi meningitis kungenzeka ubuhlungu akuyona ekhanda emuva. Iphinde kwenzeka ngokumelene isizinda lokushisa eliphezulu, ephelezelwa ubuthakathaka, ukukhathala, kwehle esesuthi, isicanucanu nokuhlanza.
By izimpawu of meningitis futhi zihlanganisa ukudideka, delirium, ukuhhema, Ukudlikizela nge ukwazi kahle. Lezi izimpawu zibonakala kancane umhla imfiva kanye bekhanda.
Ngaleso sikhathi samanje ukusho ngokuthe ngqó ukuthi ukuze abonise ukuthi meningitis e abadala kunzima ngempela: kunezinhlobo ezingaphezu futhi atypical ngaphezulu isifo ezenzeka nge izimpawu elilodwa noma amabili, futhi ngenxa yalokho akubona ikakhulukazi libizwa. Ngezinye izikhathi ngisho hlola izimpawu meningeal okungabazekayo. Kodwa uma ukhathazekile ikhanda ngokumelene lokushisa eliphezulu, ungafuni ukuba adle, futhi kunzima kakhulu ukuba ngivuke ngenxa bekhanda anda, shayela "ambulensi" futhi angali yokwemukela igciwane esibhedlela.
Ukungabi namizwa izinyawo
Pleurisy ukukhanya: ukuthi kuyini, indlela yokuphatha izindlela zabantu? Izimbangela, Izimpawu kanye Ukwelashwa pleurisy wamaphaphu. esiyingozi pleurisy wamaphaphu kanjani?
Zisize wena: kanjani ukwelapha burning izinyawo?
Glomerulonephritis ukwelashwa ekhaya
Botan - akusiwona nje izinyane
Allergy ezinsaneni: Izimbangela Nemiphumela
Udweba kanjani Murzilka? Amathiphu namacebo
Lapho kangcono ukukhipha amakhadi esikweletu iminyaka engu-19: passport, isicelo inthanethi, ngaphandle kukhulunywa
Ipaki yezingane "Skazka" e-Krylatskoye: ikheli, isithombe, ukubuyekezwa
Esinjani zinc edayiswa Pharmacy